Faah faahin:- Niman lagu eedeeyay fal basaasnimo oo lagu dilay degmada Saakow ee gobolka J/dhexe - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Niman lagu eedeeyay fal basaasnimo oo lagu dilay degmada Saakow ee gobolka J/dhexe
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa seddax qof oo gelinkii dambe shalay lagu dilay degmada Saakow ee gobolka J/dhexe, kuwaas oo ay meel fagaaro ah ku toogteen ciidanka Al-shabaab.
Seddaxdaasi nin oo lagu kala magacaabayay Liibaan Xasan Maxamed, C/laahi Maxamed C/raxmaan iyo Maxamed Salaad Kaahiye waxay maxkamadda Al-shabaab ku eedeeysay inay la shaqeyn jireen islamarkaana ay macluumaad u gudbin jireen dowlado shisheeye oo uu ka mid yahay Mareykanka.
Dilka seddaxdaasi nin oo ka dhacay meel fagaare ah oo ku yaala degmada Saakow, ayaa waxaa usoo daawasho tagay shacab aad u badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan halkaas.
Ma jirto warar madax banaan oo xaqiijinaya in raggaasi oo ay Al-shabaab ku dileen degmada Saakow inay ku dhex jireen waxyaabaha lagu soo eedeeyay iyo inkale, balse warar madax banaan oo nasoo gaaraya ayaa sheegaya in raggaasi la dilay ay hore uga tirsanaan jireen dagaalyahanadda Al-shabaab.
Si kastaba oo ay ahaataba, Al-shabaab ayaa deegaanadda ay gacanta ku hayaan waxay inta badan sidaan oo kale dilal ugu xukumaan dad ay sheegaan inay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya iyo dalal shisheeye, taas oo ilaa iyo haatan aan wax caddeyn ah loo haynin.